Gobolada Mudug iyo Karkaar oo Maanta Guul kala hoyday Ciyaaraha Gobolada Puntland – SBC
Gobolada Mudug iyo Karkaar oo Maanta Guul kala hoyday Ciyaaraha Gobolada Puntland
Waxaa goor dhoweyd soo gaba gabowday ciyaar u dhexeysay gobolada Mudug Vs Sool, taasi oo ka tirsaneyd ciyaaraha gobolada Puntland ee ka socda Garoonka Mire Awaare ee Magaalada Garoowe.
Ciyaartani oo aheyd mid aad u xiiso badan taageerayaal aad u tiro badana ay ka soo qeyb galeen ayaa waxaa ay ku soo dhamaatay islamarkaana ay guushii ku raacday gobolka Mudug oo 2-1 ugaga raayay gobolka Sool.
Sidoo kale waxaa iyana daqiiqado ka dib bilaabatay ciyaar aan ka dhicin tii hore oo siweyn looga wada sugayay gobolada Puntland taas oo dhexmartay Gobolada Haylan Vs Karkaar,
Ciyaartaasi waxay aheyd mid aad u xiiso badan oo bulshadii u soo daawasho tagtay ay si aad ah uga heleen waxaana ay soo bandhigeen labada dhinac ciyaar aad u wanaagsan.
Waxay ciyaartani ku soo dhamaatay islamarkaana ay guushii raacday gobolka Karkaar oo Haylaan kaga badiyay 2-1.
K M Cayuuni
asc hanbalyo hanbalyo ayaan leeyahay gobolka mudug haylan iyo karkaarna waxaan la jiraa karkaar waxan u rajaynayaa guul lakiin ciyahii somaliland live ayaa aduunka dhan loogala socday maxaa dhacay kuwa puntlan waa naga yar wadanisanyihiin ma la,orankaraa qaraab waxaan u sheegi lahaa tvyada wadanka ha howgala inay noo soo gudbiyaan ciyaaraha waad mahadsantihiin dhamaan
asc horta kuligood waa mahadsanyihiin waxan lajiraa gobolka mudug libaaxyadaas ayaan la jira marka kolay libaxyadaas ayaa qaadaya lkn waxan kacodsanaay inay kaso dayaan tv yada sida royal tv ama universal tv ama somalisat tv
Jimcaale shuuke says:
aad ayaan ugu faraxsanahay guusha wayne ee ay soo hoyiyeen xulka gobolka Mudug, waxaana u rajaynayaa inay ku guulsaystaan koobka…………
ibnu bashiir says:
waan soo dhowaynayaa dhamaan gobolada kasoo qayb galay tartankan waxaana si gaar ah ugu hambalyaynayaa gobolka karkaar ciyaartoyda da’da yar guusha ay soo hoyeen iyo ciyaarta quruxda badan ay soo bandhigeen viva karkaar viva qardho
sharmaarke maxamed siciid says:
waan ku faraxsanahay guusha
abshir qood says:
aad ayaan ugu faraxsanahay guusha gobolka karkaar ay soo hoyday waxaana rajayn in aan ku guulaysan doono tartankan thanks reer karakaar well done we will acheive our target goodluck
kusoo dhawada koobka kasocda gabolka puntland ee garoowe
anigoo ah axmadey cabdisamed oo joga boosaaso waxaan u rajaynayaa koobka gobolka karkaar ad iyo ad ayan utagersanahay waxaanrajaynayaa koobka ineyqadayan wayo wax hortagan maba jiraan